Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Ali Gaas ayaa kulan adag oo xasaasi ah la yeeshay qeybaha bulshada ee gobalka Mudug – Barqamaal
GAALKACYO(PTIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Ali Gaas ayaa kulan adag oo xasaasi ah la yeeshay qeybaha bulshada ee gobalka Mudug, gaar ahaana magaalada Gaalkacyo waxaana si adag looga wada hadlay xaaladda amniga ee magaalada.
Waxgaradkii hadlay ee gobalka Mudug waxay si cad u sheegeen in Galmudug ay ka dambeyso dilalka qorsheysan ee Gaalkacyo, waxay soo jeediyeen in dhamaan guryaha ay leeyihiin Shacabka Puntland ka soo jeedo ee ay haystaan Galmudug ay ka baxaan oo lagu soo wareejiyo dadkii lahaa.
Dad kala duwan oo bulshada qeybaheeda ah ayaa hadlay dhamaatoodna waxay jeediyeen hadalo xasaasi ah oo taabanaya boogaha xaaladda Gaalkacyo, waxaa lasoo qaaday wax badan oo aan horey loo sheegin.Arrimaha xasaasiga ah ee la taabtay waxaa kamid ah Guddiyadii la magacaaba in qof kasta oo xubin ka noqdo lagu dilo Gaalkacyo, cida disheyna u muuqdaan dhinaca Galmudug.
In qof kasta oo la dilay dadkii dilay ay dhinaca Galmudug u baxsadeen uusana jirin wax xariir ah oo labada dhinac ka dhaxeeya ayaa kamid ah arrimaha sida weyn loo soo qaado.
Hanaanka maamul ee gobalka Mudug oo aan is raacsaneyn waxaa la cadeeyey in ay nabadgalyaddo darrada qeyb ka tahay, waxay soo jeediyeen in talaabo deg deg ah laga qaado Dhismaha Hanaan maamul oo toosan.
Madaxweyne Gaas wuu hadlay wuxuuna si adag ugu jawaabay qof kasta oo hadlay, wuxuu cadeeyey in ay dawladdu qorshe la timid oo ay fulin doonto